Pakistana: Bilaogin’ny Fihetsehana · Global Voices teny Malagasy
Pakistana: Bilaogin'ny Fihetsehana
Voadika ny 01 Desambra 2018 13:58 GMT
Miala tsiny aho noho ny tsy namoahako lahatsoratra ny herinandro lasa teo fa lany lasantsy talohan'ny nahafahako niditra ny araben'ny aterineto sy nitondra ny fangaronà lahatsoratra Pakistaney farany mahazatra ho anareo ny scooter Vespa nitokisako. Mazava ho azy fa tezitra tokoa aho noho ny tsy nahafahako niditra ny tontolon'ny aterineto hamakiako toy ny mahazatra ireo toerana fanoratana bilaogy tiako indrindra.
Anatin'izao toepahasalamako mangidy izao (mararin'ireo soritraretina mahery vaika amin'ny fialàna amin'ny aterineto), voatery nitady loharano hafa hahazoako ny fatram-baovao iraisam-pirenena ilaiko isanandro aho. Halako ny mihaiky ity ry mpamaky malala, saingy niafara tamin'ny fijereko ny Fox News tamin'ny fahitalavitra an-tariby izany. Tsy dia ratsy nóho ny noeritreretiko ilay izy amin'ny ankapobeny. Tsapako nidina kely fotsiny ny taha-pahaizako nandritra ny fitsidihako ny Fox noho izany tsy dia ratsy nóho ny noeritreretiko ilay izy. Io fantsona io no zavatra mahatsikaiky indrindra ao amin'ny fahitalavitra an-tariby amin'izao fotoana, ankoatra ny Comedy Central, ary mendrika ny ho jerena mihitsy noho ny fanadihadiany vaovao mifototra amin'ireo paikady hajaina avy amin'ny Anjerimanontolon'ny Fanaovangazety Rocko sy ny AC Repair. Saingy mivaona amin'ny resaka aho…
Tohizako amin'ny sosokevitro amin'ity herinandro ity izany: manao fanamarihana momba ireo daroka baomba farany tao Karachi i Teeth Maestro; Mamoaka ny fanehoankeviny momba ny fampitahoran'ny gripam-borona i Suspect Paki; manoratra lahatsoratra tsy misy tomika momba ny fanalan-jaza (rohy maty) i Windmills; miverina indray i Fountainhead rehefa tsy hita tanatin'ny herinandro maro, miaraka aminà lahatsoratra tsy maintsy vakiana momba an'i Dick Cheney (pejy voafafa); manome antsika ireo vaovao farany momba ny filan'ireo niharam-boina tamin'ny horohorontany tao Pakistana (rohy maty) farany teo i Meandering; manazava antsika ny momba ny tanàna Punjabi iray adino (pejy voafafa) i Lightwithin anatinà lahatsoratra iray; Manoratra momba ny zavaniainany voalohany mifandraika amin'i Kanada i Road Less Traveled; Manolotra fomba fijery hafa momba ny raharaha Iran sy Israel (pejy voafafa) i Journey; ary farany, izaho kosa (The Olive Ream) dia manolotra anao ity fitenenan-drerinà bilaogera ity.
Tsara kokoa raha miala amin'izay aho, ho avy tsy ho ela ao amin'ny Fox News i Bill O'Reilly ary mila mihomehy aho….